Shiinaha Soosaaraha Caan Biraha Dabiiciga ah iyo Badeecad | Montary
1. Codsi: Jikada guriga, Makhaayada, Hoteelka, Mall Shopping, Xarunta Ganacsiga, Mashruuca, Injineeriyada, iwm.
2.Factory:Waxaan leenahay khadadka wax soo saar ee ugu horumarsan iyo kuwa ugu khibrada badan been abuurka; Waxaan kula kulmi karnaa cabirkaaga gaarka ah ama shuruudaha midabka ee gogosha iyo shuruudaha naqshadeynta qaaska ah ee alaabooyinka la dhameeyay oo leh mashiinka xardho CNC
Waxyaabaha: Dhagaxa Dabiiciga ah
1. Codsi: Jikada guriga, Makhaayada, Hoteelka, Mall Shopping, Xarunta Ganacsiga, Mashruuca, Injineerinka, iwm.
2. Warshad: Waxaan leenahay khadadka wax soo saar ee ugu horumarsan iyo kuwa ugu khibrada badan been abuurka; Waxaan kula kulmi karnaa cabirkaaga gaarka ah ama shuruudaha midabka ee gogosha iyo shuruudaha naqshadeynta qaaska ah ee alaabooyinka la dhameeyay oo leh mashiinka xardho CNC
Alaabta dusha dushiisa marmar
Codsi / adeegsi jikada
Faahfaahinta Cabbirka Waxaa lagu heli karaa cabirro kala duwan oo loogu talagalay alaabooyin kala duwan
(1) Cabbiraadyada sagxadaha: 96 "x26", 108 "x26", 96 "x36", ama cabbirka la habeeyay, iwm.
(2) dhumucdiisuna: 20 MM ama 30mm
(3) Qeexitaan gaar ah ayaa sidoo kale la heli karaa;
Dhammeystirka dusha sare Safeeyey
Xirmo (1) Sanduuqyada alwaaxda adag ee Seaworthy;
(2) Lagu heli karo shuruudaha xirmooyinka la adeegsaday;
Dhammaan xirmooyinka kor ku xusan waxaa lagu shaabadeyn doonaa shaabad lagu amrayo dhoofinta;
Waxyaabaha Marble Dabiiciga ah
Dhumucdiisuna 18 mm
Codsiyada Wax aan waxba tarayn, Jikada miiska sare, Jadwalka dusha sare iyo Furniture, iwm
Habka Farsamada Waxaan ka sameysannaa dhagxaan dhagax ah oo leh marmar dabiiciyan ah, oo mashiin lagu jaro ka dibna lagu safeeyo shaqaalaheena khibradda iyo khibradda leh.
Codsiga iyo Adeegsiga Qolka cuntada, qolka fadhiga, huteelka, villa, isticmaalka guriga
Xirmo Sanduuq alwaax ah oo xiranaya xumbada
Habka Bixinta T / T, L / C
Waqtiga dirida Iyadoo 15 maalmood kadib amarka la xaqiijiyo
Xulka Edge Sahlan, sanka dibiga badhkiis, sanka dibiga oo buuxa, jajaban, 1/4 wareega, lakabmay lakulmay, dahaaran 1/4, wareega laba, iwm.
Ma waxaad tahay shirkad ganacsi ama warshad? Waxaan nahay warshad, oo ku siin kara adiga tayada sare qiime jaban.
2. Maxay yihiin dhibaatooyinka suurtagalka ah ee habka rakibaadda? Dhagaxa dabiiciga ahi wuxuu leeyahay tayada jilicsan, fadlan xusuusi shaqaalaha inuu si tartiib ah u maareeyo hawsha rakibida, waxaan kuu soo jeedinaynaa inaad dalbato dhawr jibbaaran oo dheeri ah si loogu diyaar garoobo maalinta roobka. Sidoo kale, dhammaan badeecadeena waa la damaanad qaaday, iibkeenu wuxuu xallin doonaa sababaha waana hubaal in si sax ah laguu magdhabi doono
3. Miyaan heli karaa shay-baarka bilaashka ah? Haa, muunad bilaash ah ayaa la heli karaa. Laakiin waxaad u baahan tahay inaad bixiso kharashka xamuulka.
4.Ma samayn karaa alaab ka timid naqshadaheena? Haa, waxaan qabanaa OEM iyo OBM.
Hore: DHAGAX SINTERED
Xiga: nano miiska jikada miiska dushiisa
Dabiiciga Marmarka Madoow
Dhirta Marmarka Dabiiciga ah